Jwxo-shiil, oo Maqal Mooyee Aan Muuqiisa Lagu Arag South Afrika – Rasaasa News
Mar 30, 2010 Jwxo-shiil, south afrika
Sidii aanu hore idiinku sheegnay Jwxo-shiil, ayaa la sheegay in uu arimo caafimaad u yimid South Afrika. South Afrika waa xarunta ay ugu badan yihiin xubnihii hore uga tirsanaa ciidamii ururka ONLF,oo halkaas u cararay kolkii ay ogaadeen burburka uu ururka gayeysiiyey Jwxo-shiil.
Dhalinyaradan oo ciil aad u badan u qaba Jwxo-shiil, ayaa hadii ay helaan aan iyagu bariinaynin madaama uu yahay dambiile ummada Somalida Ogadeeniya dambi ka galay.
Hadaba, sida ay warar hoose yeeshagayaan tan iyo intii la sheegay in uu Jwxo-shiil, tagay South Afrika waxaa baadi goob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dhalinyaro aad u badan oo ka xoogsada South Afrika, cadho wayna u haya Jwxo-shiil, dhalinyaradaas oo isugu jira kuwo doonaya in ay gooyaan dakanayaal uu galay oo ah in uu laayey eheladood iyo kuwo uu si toos ah ugu gaystay ciqaab isaga oo isticmaalaya magaca ururka ONLF.
Sida ay baahiyaan boggaga Jwxo-shiil, waxay sheegaan in uu qabtay shirar uu u qabtay Jaaliyada. Qoraaladaas ayaan wax sal iyo raad ah lahayn, waxaan daliil u ah in aan la garan karin wajiga ay leeyihiin waa Jwxo-shiil. Makiinaha sawirada ee la isticmaalo xiligan casriga ah waa camarooyin dhijitaal ah, oo meel kasta oo aad ku sawirto si bayaana u soo saara suurada waxa la sawiray. Laakiin dadweynuhu waxay markhaati ka yihiin in ruuxa ay boggagu soo sawirayaan uu yahay duq gaaban oo gadh cad oo wajigiisa la qariyey.
Hadii uu Jwxo-shiil, shir qabto waxaa si cad loo arki lahaa wajigiisa iyo dadka uu la sawiran yahay, hadaba midna wajiyadooda ma aragno dadka la sawiran iyo Jwxo-shiil wajigiisa toona.
Waxaan marna suurto gal u ahayn Jwxo-shiil, in uu si cad iyo si qarsoon toona uu South Afrika shir ugu qabto, iyada oo aynu wada ognahay dambiyada uu galay iyo waliba xaalka South Afrika.
Mid ka mid ah dhalinyarada aadka u raadinaysa Jwxo-shiil, ayaa yidhi “nasiib uma heli karo in aan arko Jwxo-shiil oo shir qabanaya”. Mid kale ayaa yidhi “maqal mooyee waluusan jirin ruux aan reer haaruun ahayn oo arkay”, hadii uu Jwxo-shiil, kalyo leeyahay meel umbaa lagu arki lahaa, waxaanan rumaysnahay in Eritrea laga soo caydhiyey gurigii Islaantiisana uusan tagi karin oo uu doonayo in uu South Afrika ku dhuumaalaysto.
Boggag beenta ayaa waxay qoreen in uu Maadey la socdo, hadalkaas oo been ah Maadeeyna waxaa la sheegay in uu joogaa London, oo uusan meela u bixin, yaa siin kalyaha uu Maadeey south Afrika ku aadi, London ayaaba la sheegay in uusan ruuxan arkin, marka laga reebo nin bahgariya oo uu magan u yahay oo ay daris yihiin.
Dhalinyarada Somalida Ogadeeniya ee degan South Afrika ayaa waxay Codsanayaan in cidii ku aragata Jwxo-shiil, meel ka mid ah dalka South Afrika in ay nagala soo xadhiidhaan e-mailka: jwxoshiil@yahoo.com.
Dambiile Beel Daaje, Jwxo-shiil Jabhad Uma Daneeyee Qabiil Buu Doogsin Dhabaa